Dagaalyahannada Taliban oo la wareegay magaalo weyn oo katirsan dalka Afghanistan.
0 Saturday July 31, 2021 - 12:45:43
Wararka ka imaanaya wadanka Afghanistan ayaa sheegaya in ciidamada Imaarada Islaamiga ah ay la wareegay magaalo weyn oo katirsan wadankaasi.
0 Thursday July 15, 2021 - 11:59:45
Markii ugu horraysay dowladda dabadhilifka Imaaraatka Carabta ayaa safaarad ka furatay dhulka Yahuuddu maamusho ee Falasdiin iyadoona ku dhawaaqday in ay bilaawday caadiyaynta cilaaqaadka kala dhaxeeya waxa loogu yeero 'Isra'el'.
0 Wednesday July 14, 2021 - 17:15:03
Dowladda Xabashida Itoobiya ayaa ka qeylla dhaamisay horumarka ballaaran ee maleeshiyaadka jabhadda Tigreega ay ka geysanayaan waqooyiga wadanka.
0 Wednesday July 14, 2021 - 09:15:56
Asalaamu Calaykum Waraaxmatullaahi Wabarakaatuhu Fadliga 10ka Dilxijjah oo bilaabatay maalintii Axadda oo ku beegneed 11 July,2021
0 Tuesday July 13, 2021 - 17:36:04
Saldhig ciidanka Mareykanka ay ku leeyihiin Bariga Suuriya oo la weeraray.
0 Sunday July 11, 2021 - 11:57:36
Wararka ka imaanaya wadanka Suuriya ayaa sheegaya in weerar hubaysan lagu qaaday saldhig ay ku suganyihiin askar iyo saraakiil American ah.
0 Sunday July 11, 2021 - 09:21:02
0 Sunday July 11, 2021 - 08:43:26
0 Saturday July 10, 2021 - 07:57:03
Xoogag jihaadiga Taliban ayaa wali sii wada qabsashada dhil baaxad leh oo katirsan wadanka Afghanistan arrinkaas oo ka dhigan in ay gacanta ku dhigeen 85% dhulka Afghanistan.
0 Thursday July 08, 2021 - 11:18:53
Wararka ka imaanaya Afghanistan ayaa sheegaya in xoogaga jihaadiga ah ay markale lawareegeen gacan ku haynta magaalooyin istiraatiiji ah.
0 Thursday July 08, 2021 - 08:41:18
Booliska wadanka Koonfur Afrika ayaa ku dhawaaqay in uu iskusoo dhiibay Jacob Zuma oo ah madaxweynihii hore ee wadankaas balse loo heysto eedo musuq maasuq.
0 Wednesday July 07, 2021 - 09:38:33
Weeraro culus oo lagu miray saldhigyo ciidamada Itoobiya iyo AMISOM ay ku leeyihiin Soomaaliya.
0 Monday July 05, 2021 - 12:32:14
Weeraro culus ayaa xalay markale lagu miray saldhigyo ay ciidamada shisheeye ku leeyihiin gobollo dhaca Koonfurta dalka Soomaaliya.